Ungachinja sei mutauro muFirefox, LibreOffice uye mamwe maGnu / Linux zvinoshandiswa | Linux Vakapindwa muropa
Mazhinji maGnu / Linux anogoverwa anouya muChirungu nekutadza uye izvo zvinowanzova dambudziko kune vatauri veSpanish nevamwe vashandisi vasingataure Chirungu. Asi dambudziko harisi mukugovera chete asi mune izvo zvaunoshandisa izvo zviri zvakare mune iwo mutauro.
Zvinogona zvakare kunge kuti dambudziko riri mukushandisa uye kwete mukuparadzira, ndiko kuti, kunyangwe paine kugoverwa muSpanish, iko kunyorera kunochengetedza mutauro waro.
Munguva pfupi yapfuura, ndichishandisa Debian, zvakaitika kwandiri kuti iyo default vhezheni yeFirefox iri muSpanish asi vhezheni yekupedzisira yandaisa kuburikidza nechengetedzo yaive muChirungu. Neraki, akashandisa GNU / Linux uye zvinoreva kuti tinogona kuchinja zvese, dambudziko nderekuziva kuzviita.
Asi zvino isu tichaenda kukuudza maitirwo azvo kuti ungashandure sei mutauro muFirefox pamwe nezvimwe zvinoshandiswa zvinozivikanwa mukati mekuparadzirwa kweGnu / Linux. Kunyangwe isu tichifanira kucherechedza kuti shanduko yemutauro yakadai inongoshanda chete kumamenyu uye neruzivo rwekuburitsa kubva pachirongwa, kodhi yechirongwa uye nezvayo zvemukati zvichave muChirungu, mutauro wemitauro yakawanda yekuronga.
1 Chinja mutauro muFirefox
2 Chinja mutauro muLibreOffice
3 Chinja mutauro muKrita
4 Chinja mutauro muThunderbird
5 Chinja mutauro muVLC
6 Sipanish kana Chirungu, ndeupi mutauro wekusarudza?
Chinja mutauro muFirefox
Mozilla Firefox ingangove application inonyanya kufarirwa pane ese, nekuti havasi isu tese tinoshandisa Linux kunyora kana kugadzira mifananidzo, asi isu tinoshandisa Linux kuongorora Internet. Kuchinja mutauro muFirefox hakuna kuoma pane kushandura mutauro mune zvimwe zvinoshandiswa. Chekutanga pane zvese isu tinofanira kuenda kune yedu software manejimendi chishandiso uye isa firefox-l10n-en package. Kune izvi isu tinogona kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Muchiitiko chekuve neFirefox ESR, izvo zvatinofanirwa kunyora mune terminal ndizvo zvinotevera:
Semumabasa ekutanga, isu tinofanirwa kushandura rairo "apt-tora" nemirairo inoenderana yekuisirwa mapakeji yekugovera kwatinoshandisa.
Isuwo tinofanirwa kushandura hunhu hwekodhi yeFirefox kuti tishandure mutauro muFirefox. Nokuda kweizvi isu tinofanira kuenda Zvaunofarira uye muchikamu cheGeneral isu tinodzikira kuMutauro uye nekuonekwa. Iye zvino tinodzvanya bhatani re "Sarudza" uye tinotsvaga pasuru yemutauro wedu, ingave Spanish kana mumwe mutauro.
Pane sarudzo yechitatu iyo inoshandiswa sekupedzisira. Iyi sarudzo inosanganisira kunyora "nezve: kumisikidza" mubara rekero reFirefox. Gare gare Isu tinotsvaga iyo yekupinda intl.locale.requested uye tinya kaviri pamusuwo, ikozvino taisa kukosha "es-ES". Hatigone kuwana tambo intl.locale.requested, mune iyi kesi isu tinongofanirwa kugadzira nyowani yekupinda, tidane saizvozvo uye serudzi rwetambo tinoti yakakosha tambo kana isu tinoisiya isina chinhu.
Mumwe akaita shanduko ku pamusoro: config, isu tinovhara iyo tabu uye titangise webhu saiti kuitira kuti shanduko dzakaitwa dzishandiswe.
Chinja mutauro muLibreOffice
Libreoffice inozivikanwa kwazvo uye inodikanwa hofisi suite. Kunyange chiri chokwadi kuti vanhu vazhinji uye vazhinji vari kushandisa hofisi masutu paGore, Libreoffice inoramba ichizivikanwa uye inoramba iri imwe nzira kune avo vasingakwanise kupinda paInternet pane dzimwe nguva.
Neraki, mune ino kesi hatifanirwe kushandura mutauro application mushure mekushandisa asi zvinongokwana kuisa imwechete package. Kuti tiite izvi tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Isu tichachinja rairo "Apt-Get" zvinoenderana nekuparadzira kwatiri kushandisa, sezvo apt-get inowirirana nekugovera kunobva paDebian neUbuntu.
Iye zvino tinofanirwa kugadzirisa maduramazwi, ayo kazhinji anenge atove muchiSpanish asi izvo zvingangodaro zvisina kudaro. MuRibreOffice Munyori tinoenda kune Zvishandiso → Sarudzo uye hwindo senge rinotevera richaonekwa:
muhwindo iri tinoenda kuMutauro tebhu uye isu tinosarudza dzese sarudzo dzakanangana neES kana Spanish. Isu tinogamuchira shanduko uye tinotangazve iyo Libreoffice kunyorera kuti shanduko dziiswe nenzira kwayo.
Chinja mutauro muKrita
Kunyangwe kune vazhinji vashandisi veLinux Gimp iri default graphical mupepeti, vazhinji uye vazhinji vashandisi vanofarira kushandisa Krita. Mune ino application, kunyangwe iine kugoverwa muSpanish, inowanzo kuunzwa muChirungu. Asi kuchinja mutauro muKrita kuri nyore kwazvo. Isu tinongofanirwa kuenda kuchiteshi tinyore zvinotevera:
(Semazuva ese, "apt-tora" inofanirwa kutsiviwa nemutemo unoenderana kubva kune yekugovera software maneja).
Chinja mutauro muThunderbird
Mozilla Thunderbird muteereri we email. Ehe, kuchine vanhu vanoshandisa vatengi veemail. Ichi chirongwa cheMozilla uye kune vazhinji chichava nezvakanakira nekuipira. Panyaya yekuchinja mutauro, tinogona kutaura kuti inoita zvakafanana, asi kuchinja zita reFirefox kuva Thunderbird, ndiko kuti, isu tinofanirwa kutevedzera anenge matanho akafanana ekuchinja mutauro muFirefox. Nekudaro, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Uye iwe zvakare unofanirwa kuita mamwe ese mashandiro: kuchinja mutauro mune Zvekufarira menyu uye nekuzotevera kusarudza mutauro watinoda kushandisa.
Chinja mutauro muVLC
Iyo multimedia yenyika yakafukidzwawo mune ino chinyorwa kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti kazhinji, mushandisi anoziva nemamenyu evatambi ve multimedia muChirungu (ndiani asingazive zvinoreva bhatani rePlay?). Mune ino kesi isu ticha taura nezve chirongwa vlc, mutambi wemultimedia uyo wakazviwana pachayo kuti uve mumwe wevatambi vanonyanya kushandiswa pakati pevashandisi veGnu / Linux. Iko kunogara kune kudikanwa kwekuisa mamenu muSpanish, kunyanya kana tichida kugadzirisa nekugadzira mavhidhiyo neichi chishandiso. Mune ino kesi, isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Izvi zvichaita kuti mutambi wedu watinofarira wemultimedia ave nemamenu muSpanish pamwe nemazhinji emabasa emutambi.
Sipanish kana Chirungu, ndeupi mutauro wekusarudza?
Aya ndiwo mamwe mapurogiramu atinoshandisa uye maitiro ekuchinja mutauro wavo. Chimwe chinhu chinobatsira vashandisi vazhinji vanoziva mutauro weShakespeare asi zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti nekuda kweYouTube uye nemirayiridzo yekuona, isu tinokwanisa kurarama nemazvo nezvirongwa tisinga shandure mutauro wemamenyu.
Ini pachangu chinhu chekutanga Ini ndinoita mushure mekuisa kugovera kushandura mutauro muFirefox neLibreoffice, mapurogiramu maviri andinoshandisa zvakanyanya uye andinonzwa zvirinani nawo muchiSpanish. Mamwe mapurogiramu handiwanzo shandura kana kuti ndinozviita mushure, zvichienderana nekushandisa kwandinopa, asi ndizvo zvandinoda. Zvino, ndiwe unosarudza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Ungachinja sei mutauro muFirefox, LibreOffice uye mamwe maGnu / Linux mafomu
Zvakafanana ne Audacity ???
Muchiitiko che Audacity, inogadziriswa otomatiki zvichienderana nemutauro system. MuOpensuse, iri yega yekushinga-lang faira. PaDebian uye zvigadzirwa, inoiswa otomatiki.
Hechino chinongedzo kune iyo Audacity wiki kuitira kana iwe uchifanira kuchinja kana kusarudza mumwe mutauro marongero
Kune bhagi, mumhuri ye "-buntus" 17.10, kuti kana uchigadzirisa kuFirefox 59, inosiya mutauro muChirungu. Kunyangwe iyo faira ikaiswa muchiSpanish, kunyangwe iyo faira firefox-l10n-en yakabviswa, ichiri kuoneka muChirungu. Uyezve, mumitauro yekuwedzera, chiSpanish chinoratidzika senge chisipo, asi hachiremekedze
Pakupedzisira, ndakafunga kuibvisa ne apt apt –purge firefox, kurodha pasi kubva paFirefox webhusaiti uye kuita bhuku rekuisa. Muchiitiko icho iIYO yairemekedza mamiriro emutauro wangu.
Zvinotaridza kwandiri kuti iyo faira irikutorwa, firefox-l10n-en, iri muChirungu. Kumwe kukanganisa mukutumidza mazita emapakeji kunotungamira kuchinetso ichi.
Iwe unogona kundiudza maitiro ekuisa iyo yakasviba modhi paLO? Ndokumbirawo, zvinotaridzika zvakanaka.
Mhoro, Ndiregerere asi ini ndanyowani patsva pakombuta iyi, apo ini ndoda kuisa: sudo apt-tora kuisa firefox-ESR-l10n-es
anondidzosera: Kuverenga pasuru runyorwa ... Kuitwa
E: Iyo firefox-ESR-l10n-en package haina kugona kuwanikwa
Vanogona kundibatsira. Ndapota?
Pave neanopfuura makore maviri kubvira pawakaiburitsa uye chinyorwa chako chichiri kubatsira. Ndatenda, shamwari Joaquín García.